Anna Nicole Smith waxay adduunyo darteed u guursatey, maalqabeen 63 sano ka weyn, akhri damaceedii. - WalWaal Online News and Information about Somalia
Home News Anna Nicole Smith waxay adduunyo darteed u guursatey, maalqabeen 63 sano ka...
*** PREMIUM EXCLUSIVE *** Anna Nicole Smith marries oil tycoon J. Howard Marshall II in Texas, on June 27, 1994. Busty blonde Playboy model Smith, then 26, and 89-year-old Marshall held hands as they said their vows and exchanged rings at The White Dove Wedding Chapel, Houston. Smith, whose real name was Vickie Lynn Hogan, died on February 8, 2007, in a Hollywood, Florida, hotel room as a result of an overdose of prescription drugs. Pix taken June 27, 1994. 15 Dec 2016 Pictured: Anna Nicole Smith and J. Howard Marshall. Photo credit: WKAN / MEGA TheMegaAgency.com +1 888 505 6342 (Mega Agency TagID: MEGA7511_002.jpg) [Photo via Mega Agency]
(Walwaal Online) 25 Nof 2020 – Haweeneydaan waxaa lagu magacaabaa Anna Nicole Smith. 1994-kii ayey guursatay nin duqa oo Milyaardeera, oo la yiraahdo James Howard Marshall. Anna Xilligaas waxay jirtay 26 sano, halka Howard Marshall uu ka waynaa iyada 63 sano.
Waxay aheyd qalanjo aad u qurux badan oo ka shaqeyn jirtay bandhigga dharka iyo wax jilidda. Waxay u guursatay odayga in ay mar uun wax ku yeelato hantidiisa faraha badan.
Sagaashan jir ayuu ku dhintay, guurkooduna waxuu raagay 18 bilood oo qura. Markii ay istiri saammigaadii dhaxsha wax ka qaado, ayaa waxaa caddaatay in dardaaranka Mr J. Howard uusan ku jirin magaceeda, oo hantidiisa uu u dardaarmay wiil uu dhalay. Anna Nicole Smith waxay billaawday legdan iyo qareen qabsasho, si ay u hesho qeybta ay ku leedahay dhaxalka.
Hantiduu ka tagay Mr James Howard Marshall, waxaa lagu qiyaasay 1.6 milyaardi oo dollar oo uu ka helay saliidda Gobolka Texas.
Anna Nicole Smith waxay dhimatay 2007, iyada oo jirta 39 sanno. Galdacweedkii ay ku rabtay dhaxashiina uu wali sidii u furan yahay. Waxay dhashay gabar yar oo wali la isku heysto ninka aabbaha u ah gabadhaas.
Haddii Qareennadu ku guuleystaan dacwaddeedii hore, gabadha yar ee ay ifka uga tagay, waxay heli doontaa lacag aad u fara badan, mase la hubo guusha!!! Saddax nin ayaa isku heysta aabbanimada gabadheeda, walow ay Anna sheegtay in nin u ah qareen uu ka dhalay gabadha, balse rag kale ayaa ku heysta, oo dacwaddeedu waa socotaa.
Waxa habboon, gabdhaha yaryar ee hantida darteed u guursada odayaasha in ay iska sii hubiyaan, in odeygu waxuu hayey kala qeybiyey iyo in kale, haddii kale, waxay la kulmi karaan waxa ku dhacay Qalanjo Anna Nicole Smith, oo waxay gacanta u galayaan odayaal wax walba ka soo dardaarmay, oo raba in ay xoogaa yar ka sii faramaceystaan, ilaa ay u timaaddo geeridu.
Previous articleUhuru, Raila launch BBI signature drive, urge Kenyans to support initiative
Next articleDaawo Wareysi; Burhanu,oo ka soo jeeda qawmiyada #walayta, oo sheegay in ethiopia ay kala tegayso.
Awoodaha Iraan oo maalinba maalinta xigta isasoo taraya
Go,aano ka soo baxay Puntland ka dib markuu Dani jahawareer ku ridey shilling somaliga
Guddoomiye Jeyte oo si adag uga hadlay shacab iyo askar laga afduubtay G/Hiiraan
Walwaal Online - January 16, 2021
Schools in Northeastern are still struggling with inadequate teachers. A tour by three principal secretaries in the area revealed...
Garissa enacts water management framework 2018
Al Shabaab militants rob bus crew, passengers in Wajir attack
One person killed in fighting between herders
Shabaab holding three who went missing after Mandera attack, say police
Garissa elders raise alarm over war drumbeats in Somalia
2,000 Garissa residents to benefit in Phase II of UHC